Android Wear 2.0 သတင်းများ Gadget သတင်း
ဤရွေ့ကားကျွန်ုပ်တို့သည် Android Wear 2.0 တွင်တွေ့ရမည့်အဓိကအသစ်အဆန်းများဖြစ်သည်
Villamandos | | အန်းဒရွိုက်, Wearable devices များ
မနေ့ကပဲ Google ကဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် Android Wear 2.0၎င်း၏လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဒုတိယဗားရှင်း၊ အထူးသဖြင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဝတ်ဆင်သူများအတွက်ထုတ်လုပ်သူ၊ စမတ်နာရီများမှာသံသယရှိစရာမလိုပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာမနေ့ကရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးမှကြေငြာခဲ့တဲ့ software update ကိုရရှိမယ့်စမတ်နာရီအပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့ပြပြီးပါပြီ။
Android Wear ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ David Singleton ၏ပြောကြားချက်အရ၎င်းသည်မည်သည့် update မျှသာမဟုတ်ဘဲယနေ့အထိပြုလုပ်ထားသည့်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဤဆောင်းပါး၌သင့်အားပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Android Wear 2.0 တွင်တွေ့ရမည့်သတင်း.
1 Google ကလက်ထောက်
3 applications များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်နယူးဖြစ်နိုင်ခြေ
5 အန်းဒရွိုက် Pay ကို
အဆိုပါစောင့်ဆိုင်းရှည်လျားပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ခဲ့သည် ဂူဂဲလ်ရဲ့စမတ်လက်ထောက်ကငါတို့လက်ကောက်ဝတ်ကိုရောက်ပြီ။ လက်ပတ်နာရီပေါ်ရှိခလုတ်တစ်ချက်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်သို့မဟုတ် "OK Google" လက်ကိုင်အသံဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ပေးလိမ့်မည်။
ယနေ့ရာသီဥတုကိုသိခြင်း၊ မနက်ဖြန်ဘာဖြစ်မည်ကိုသိခြင်း၊ အလုပ်စာရင်းစာရင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ကြိုတင်မှာကြားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းသည်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီး၏အသိဉာဏ်ရှိလက်ထောက်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
Android Wear 2.0 ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ပါ Google ကလက်ထောက် ဘ ၀ ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အခက်အခဲများစွာမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်တို့ဖြင့်သာရရှိနိုင်ကြောင်းသတိရပါ၊ သို့သော်ဂူဂဲလ်ကမူနောင်တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများဖြင့်ဘာသာစကားများပိုမိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည် သူတို့တွင်စပိန်ဘာသာရှိပြီး၎င်းသည်နောက်မှမဟုတ်ဘဲမကြာမီဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Android Wear အသုံးပြုသောစမတ်နာရီကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးနီးပါးလွဲချော်ခဲ့သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ Android Wear 2.0 နဲ့အတူ Google ကငါတို့မြင်နိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းနည်းပဲစဉ်းစားတယ်။ ဒါကအများကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်.
ယခုမှစ။ ငါတို့ရွေးချယ်သောသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုပြသနိုင်အောင်နာရီမျက်နှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများဖြင့်မတူညီသောပြားများကိုကွဲပြားခြားနားသော configure များပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်လက်ချောင်းကိုဘယ်ဘက်သို့ညာသို့ရွှေ့ခြင်းဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏နေရာပေါ် မူတည်၍ သတင်းအချက်အလက်ပြားများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်သည်အားကစားခန်းမအတွင်း၌ရှိသကဲ့သို့ရုံး၌ရှိလျှင်ဒေတာတူညီရန်မလိုပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤအပိုင်းကိုသင်ပြောပြရမည် applications များနှင့် functions များအကြားအဆင့်များကိုများစွာရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေလိမ့်မည် အချို့သော panel များမဝင်ရောက်မီ။
Android Wear 2.0 ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ operating system တိုးတက်လာရုံသာမကဘဲ application များစွာသည်တိုးတက်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်, အသုံးပြုမှုနေသောငါတို့ရှိသမျှကိုအကျိုးသက်ရောက်စေ၏။
ဥပမာအား Google ကြံ့ခိုင်မှုစမတ်နာရီအများစုတွင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားအကွာအဝေး၊ ကယ်လိုရီသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းမှုတို့ကိုတိုင်းတာရန်၊ သင်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊
Facebook Messenger, Glide, Google Messenger, Hangouts, Telegram နှင့် WhatsApp တို့သည်လည်းတိုးတက်လာပြီးသင်တုန့်ပြန်နိုင်သည့်စာတစ်စောင်၏အသိပေးချက်ကိုထိခြင်း၊ သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အဖြေကိုဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။
ယခုတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် Google Play မှ application များကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်သည် ၎င်းသည်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မသုံးသောအရာများကိုမီနူးမှဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
Android Wear 2.0 ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာချိန်တွင်အသိပေးချက်များသည်များစွာပြောင်းလဲသွားသည်။ မည်သူမျှမကြိုက်ကြသည့်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာသောအဖြူရောင်ကဒ်များအစားယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သတိပေးချက်များကိုပိုမိုရိုးရှင်းပြီးအသုံးဝင်သောနည်းလမ်းအားလုံးတွင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအရောင်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးစီမြင်တွေ့ရမည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်လက်ကောက်ဝတ်ကိုသင်၏မျက်လုံးထဲသို့ယူဆောင်လာသည့်အခါနှင့်သတိပေးချက်များအားလုံးကိုအတူတကွမြင်လိုပါကပြproblemနာမရှိပါ။ သင်ကမြင်ကွင်းမျက်နှာပြင်ကိုလျှောရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Android Wear 2.0 တွင်တွေ့မြင်ခံစားနိုင်သည့်အဓိကအချက်များစာရင်းကိုပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မေ့မရနိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အရုပ်များသို့ Android Pay ရောက်ရှိလာခြင်း။ နောက်ဆုံးတွင် Google ၏ငွေပေးချေမှုစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နာရီများသို့ရောက်ရှိလာပြီးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင် NFC ရှိနေသရွေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နာရီကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤငွေပေးချေမှုစနစ်သည်နောက်လိုက်များစတင်ရရှိလာပြီဖြစ်ပြီးယခုအခါ၎င်းသည် Android Wear သို့ဆင်းသက်လာပြီဖြစ်သည့်အတွက်သူတို့၏ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေသည့်သုံးစွဲသူအရေအတွက်သည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဤအရာသုံးခုသည်သင်၏အနာဂတ်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ထပ်ကျနော်တို့သံသယ, ရှင်းလင်းဖို့, သင်ပြ စမတ်နာရီများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများကသတ်မှတ်ရန်ကျန်သေးသောနေ့များတွင် Android Wear 2.0 update ကိုသူတို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စမတ် Casio PRO TREK
မိုက်ကယ် kors access
အမျိုးသမီးများအတွက် Moto 360
New Balance RunIQ ဖြစ်သည်
TAG Heuer ချိတ်ဆက်ထားပြီး
မကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သော LG Watch Style နှင့် LG Watch Sport တွင် Android Wear 2.0 ကိုမူလအတိုင်းတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များ၌ဂူးဂဲလ်၏ operating system ဗားရှင်းအသစ်များရောက်ရှိလာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိရပါ။ နှင့်အသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ကနေကောက်ချက်ဆွဲစတင်ပါ။
Android Wear 2.0 မှာ Google မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုအသစ်တွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။။ ဤထင်မြင်ချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါ။ Android Wear ဗားရှင်းဖြင့်သင်ရှာဖွေသည့်ကုမ္ပဏီကြီးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » Wearable devices များ » ဤရွေ့ကားကျွန်ုပ်တို့သည် Android Wear 2.0 တွင်တွေ့ရမည့်အဓိကအသစ်အဆန်းများဖြစ်သည်
ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူအတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းသည်နို့ဖြစ်နိုင်သော်လည်းသတိပေးချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ... shit ..
နာရီကိုသင်ကြည့်လျှင်ပင်“ up” မထိသရွေ့သင်၌မည်သည့်အကြောင်းကြားစာရှိပါသလဲကိုမသိနိုင်ပါ။ သူတို့ကအဲ့ဒီမှာနေဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ်။
ပြီးတော့ WhatsApp ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ... pliqui ထဲမှာအဲဒါကိုမေ့လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးလက်ခံရရှိထားသူများကိုစကားပြောဆိုမှုထိပ်တွင်ထားရန်မည်သူ့ကိုစိတ်ကူးခဲ့သနည်း။
၎င်း၏ယုတ္တိသဘောအရချချန်ထားပါ။ အကယ်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောချက်ချင်းဖတ်လိုပါကပြောင်းလဲသွားသူအားလုံးအတွက်အရွေးခံရန်မလိုပါ။
ထိုအဖြေကို ... အားလုံးမလွယ်ကူပါ။ သငျသညျမတိုင်မီမျက်နှာပြင်နှင့်အဖြေ "အနီးအနား" ။ ယခုသင်အဖြေပေးနိုင်ရန်နှိပ်ရန်အိုင်ကွန်အတွက် converter အတွင်းသို့ကြည့်ရပါမည်။
ပြီးတော့မင်းရဲ့နှုတ်မချခင်ခဏအကြာမှာ ... သတင်းစကားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပို့ခြင်းခံရသည်။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏လက်ကိုလွတ်လပ်စွာထားရှိပြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုထိတွေ့။ ပို့ပေးမည့်အိုင်ကွန်လေးပေါ်လာရန်စောင့်ဆိုင်းရပါမည်။
ကားမောင်းနေစဉ်မှာပင်သင်အန္တရာယ်မရှိဘဲ WhatsApp ကိုအဖြေပေးနိုင်သည်။ အခုစမ်းကြည့်ရတာတကယ်မိုက်မဲမှုပဲ။
LG G6 အသစ်၏မျက်နှာပြင်သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားလာသည်